हमजा आदिलका लेखहरू Martech Zone |
द्वारा लेखहरू हमजा आदिल
Hamzah Adil मा एक डिजिटल मार्केटिंग कार्यकारी हो स्विफ्टच्याट, एक प्रत्यक्ष कुराकानी अनुप्रयोग तपाईको ग्राहक समर्थन र बिक्री टोलीलाई सहयोग पुर्‍याउन।
Th चीजहरू जुन तपाईंले आफ्नो ईकॉमर्स वेबसाइट सुरू गर्नु अघि विचार गर्नु पर्छ
मङ्गलबार, जुन 8, 2021 मङ्गलबार, जुन 8, 2021 हमजा आदिल
ईकमर्स वेबसाइट सुरू गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ? यहाँ पाँच कुराहरु छन् जुन तपाईले आफ्नो ecommerce वेबसाइट सुरु गर्नु भन्दा पहिले विचार गर्नु पर्छ: १. सही उत्पादनहरू छ ईकामर्स व्यवसायका लागि सहि उत्पादन पत्ता लगाउनु भन्दा पहिले गरेको भन्दा सजिलो छ। मानौं कि तपाईंले श्रोता खण्ड कम गर्नुभयो, तपाईं बेच्न चाहानुहुन्छ, के बेच्ने भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले उत्पादनको बारेमा निर्णय लिनुहुँदा जाँच गर्नुपर्दछ। तिम्ले पर्छ